सरकारी कर्मचारी पोखरेल ग्लोबल आईएमई बैंकको मार्केटिङ्ग हेड, बैंकका विज्ञापन आफ्नै लगानीको अनलाइन पोर्टलमाः कर्पोरेट सुशासनको धज्जी ? सरकारी कर्मचारीले बैंकमा जागिर खान पाइदैनन्ः प्रबक्ता राष्ट्र बैंक - Aathikbazarnews.com सरकारी कर्मचारी पोखरेल ग्लोबल आईएमई बैंकको मार्केटिङ्ग हेड, बैंकका विज्ञापन आफ्नै लगानीको अनलाइन पोर्टलमाः कर्पोरेट सुशासनको धज्जी ? सरकारी कर्मचारीले बैंकमा जागिर खान पाइदैनन्ः प्रबक्ता राष्ट्र बैंक -
विकास बैंकको नाफा १७% ले बढ्यो
नबिल बैंक, सीएनआई–वुमन लिडरसीप र महिला शक्ति विकाश केन्द्रबीच सहकार्य
लुम्बिनी विकास बैंकको नाफा ३४ प्रतिशत बढ्यो
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नाफा १ अर्ब ९१ करोड
डिशहोमको अफरः ८९९ मा १०० एमबीपीएस इन्टरनेट
कर्मचारी सञ्चय कोषद्वारा ६० करोड र ४ अर्ब हिमालयन बैंकलाई घाटा हुने भन्दै मर्जर नगर्ने प्रतिवेदन पेशः सञ्चालक थापाद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएर मर्जर गराउने धम्की !
सबै वित्तिय सूचकहरुमा एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड अग्रणी स्थान ओगट्न सफलः २७ वाणिज्य बैंक मध्येकै कान्छा सीइओ न्यौपानेको दुरगामी सोचकै कारण बैंकले मार्यो फड्को ?
एक बोतल रक्सीकै ६ लाख भन्दा बढि मुल्यमा विक्री गर्ने, ग्रीनलाईन सेन्टरका सञ्चालक अग्रवाल दाजुभाइलाई नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लगायत ५ बैंकले दिएको ३ अर्ब कर्जा फस्योः रक्सी पसलमै बैंकहरुको डरलाग्दो सूचना !
हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक बीच मर्जर अन्यौलमा
सरकारी कर्मचारी पोखरेल ग्लोबल आईएमई बैंकको मार्केटिङ्ग हेड, बैंकका विज्ञापन आफ्नै लगानीको अनलाइन पोर्टलमाः कर्पोरेट सुशासनको धज्जी ? सरकारी कर्मचारीले बैंकमा जागिर खान पाइदैनन्ः प्रबक्ता राष्ट्र बैंक
कुमारी बैंक लिमिटेडका कामू सीइओ तिमिल्सनाको दुरगामी सोचकै कारण १९ करोड जनताको निक्षेप सुरक्षितः बैंकका उच्च कर्मचारीहरु निर्दोष !
आइतवार, पुस १८, २०७८
ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड यस्तो बैंक हो । उसलाई जे गर्दा पनि छुट छ भन्दा फरक पर्दैन । किनभने सो बैंकका सीइओ रत्नराज्य बज्राचार्य नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीका गुरु हुन् भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । ग्लोबल आईएमई बैंकमा एउटा घिनलाग्दो र डरलाग्दो घटना फेला परेको छ । बैंक भित्र राष्ट्र बैंकका पूर्व डिपुटी गर्भनरका श्रीमती देखि गोरखापत्र संस्थानका जागिरेहरुको हालिमुहाली छ भन्दा फरक पर्दैन । हेक्का होस्, छानवीन होस् ।
भनिन्छ आफ्नो हात जगन्नाथ भन्ने उखान जस्तो घटना ग्लोबल आईएमई बैंक भित्र फेला परेको छ । सरकारी कर्मचारी योगेश पोखरेल ग्लोबल आईएमई बैंकका मार्केटिङ्ग हेड छन् । उनीकै लगानीमा सञ्चालित www.newspolar.com पनि छ । उनीले बैंकको कर्पोरेट सुशासन विपरित गएर उक्त अनलाईन पोर्टलमा विज्ञापन गरेका छन् भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । सीइओ रत्नराज्य बज्राचार्यज्यू हेक्का होस् ।
गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले छुट दिएका छन् भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने ग्लोबल आईएमई बैंकले कर्पोरेट सुशासनको धज्जी उठाएको देखिन्छ । भन्दा फरक पर्दैन । यस बारेमा गोरखापत्र संस्थानका कर्मचारी एवं ग्लोबल आईएमई बैंकका मार्केटिङ्ग हेड योगेश पोखरेलले पंक्तिकारसंग भने हो म गोरखापत्र संस्थानमा करारमा रातको समयमा डेक्समा काम गर्दछु । उनीले थपे म पत्रकार हो मेरो अनलाईन पोटलमा विज्ञापन राख्ने मेरो अधिकार हो ।
सरकारी स्वामित्वको गोरखापत्र संस्थानमा राती डेक्समा उनी पत्रकारिता गर्दछन् । र दिउँसो ग्लोबल आईएमई बैंकमा जागिर खान्छन् । के सरकारी कर्मचारीले बैंकमा जागिर खान छुट छ ? यसबारेमा नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्त डा. गुणाकर भट्टले भने सरकारी कर्मचरीले बैंकमा जागिर खान पाइदैन । तपाईले भनेको सहि भए छानवीन हामी तत्कालै गर्नेछौं । उनीले थपेः– केही बैंकहरुले बैंकको मिडिया कन्सलटेन्ट राख्ने गरेको गुनासो हामी कहाँ आएको छन् नि । उनीकै शब्द सापटी लिने हो भने सरकारबाट तलब भत्ता लिने कुनै पनि कर्मचारीले अर्को प्राइभेट बैंकमा काम गर्न पाइदैन ।
तर ग्लोबल आईएमई बैंकमा सबै कुरा गर्न गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले छुट दिएका छन् भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने ग्लोबल आईएमई बैंकले कर्पोरेट सुशासनको धज्जी उठाएको देखिन्छ । भन्दा फरक पर्दैन । यस बारेमा गोरखापत्र संस्थानका कर्मचारी एवं ग्लोबल आईएमई बैंकका मार्केटिङ्ग हेड योगेश पोखरेलले पंक्तिकारसंग भने हो म गोरखापत्र संस्थानमा करारमा रातको समयमा डेक्समा काम गर्दछु । उनीले थपे म पत्रकार हो मेरो अनलाईन पोटलमा विज्ञापन राख्ने मेरो अधिकार हो । तपाई जागिरे भएको ग्लोबल आईएमई बैंकको विज्ञापन राख्न पाइन्छ त ? भनी पंक्तिकारले गरेको अर्को प्रश्नमा उनीले थपेः– म ग्लोबल आईएमई बैंकको मिडिया कन्सलटेन्ट हो विज्ञापन अनलाईन पोर्टलमा राख्ने मेरो अधिकार नै हो नि होइन र ?
उनीकै शब्द सापटी लिने हो भने उनी दुबै तर्फ जागिरे छन् । उनको लगानीमा अनलाईन पोर्टल पनि छ यो ठिक छ तर लाखौ जनताको डिपोजिटबाट उनी जागिरे भएको बैंकको विज्ञापन आफ्नै लगानीको अनलाइनमा राख्ने उनीलाई कुनै अधिकार छैन । यो बैंकको कर्पोरेट सुशासन विपरित छ भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । सीइओ रत्न राज्य बज्राचार्यज्यू हेक्का होस् । भनिन्छ ग्लोबल आईएमई बैंकमा हामी जस्ता निरिह जनताहरुको शेयर छ । डिपोजिट पनि छ । खाता पनि छ तर, जनताको डिपोजिटलाई आफ्नो हात जगन्नाथ गर्ने अधिकार बैंक सीइओ देखि कुनै पनि कर्मचारीलाई छैन । यो कसैको व्यक्तिगत कम्पनी होइन हेक्का हुनु पर्दछ कि पर्दैन ।
गोरखापत्र संस्थानका सरकारी कर्मचारी योगेश पोखरेल मार्केटिङ्ग हेड छन् नि त भनी गरिएको प्रश्नमा उनीले भने हो योगेश जी गोरखापत्र संस्थानको करार कर्मचारी हुन् हाम्रो बैंकमा जागिरे भन्दा पनि मिडिया कन्सलटेन्ट हो नि । उनीकै शब्द सापटी लिने हो भने जे भएपनि सरकारी कर्मचारीले ग्लोबल आईएमई बैंकमा जागिर खाएको चाहि सत्य हो ।
यस बारेमा पंक्तिकारले ग्लोबल आईएमई बैंकका सीइओ रत्नराज्य बज्राचार्यसंग प्रतिक्रिया माग्दा उनीले भनेः– सरकारी कर्मचारीले बैंकमा जागिर खान पाइदैन नि । तपाईकै बैंकमा गोरखापत्र संस्थानका सरकारी कर्मचारी योगेश पोखरेल मार्केटिङ्ग हेड छन् नि त भनी गरिएको प्रश्नमा उनीले भने हो योगेश जी गोरखापत्र संस्थानको करार कर्मचारी हुन् हाम्रो बैंकमा जागिरे भन्दा पनि मिडिया कन्सलटेन्ट हो नि । उनीकै शब्द सापटी लिने हो भने जे भएपनि सरकारी कर्मचारीले ग्लोबल आईएमई बैंकमा जागिर खाएको चाहि सत्य हो । यसले के प्रस्ट गर्दछ भने ग्लोबल आईएमई बैंकले कर्पोरेट सुशासनको धज्जी उठाएको देखिन्छ । सचेत भया ।
वाणिज्य बैंकरुमा कोरोना कहर उच्चः करिब ७ हजार कर्मचारी संक्रमित सय भन्दा बढि शाखा बन्दः राष्ट्र बैंक बेखबर !
एनआईसी एशिया, एनएमबी, लक्ष्मी र ग्लोबल आईएमई बैंकको ५१ प्रतिशत लगानी रहेका लघुवित्त मर्जरमा नगर ठाडो कारवाहीः राष्ट्र बैंक
विश्व बजारमै नभएको महामारीको बीमा गर्ने, निजीवन बीमा कम्पनीहरुले कोरोना बीमाको भुक्तानी नगरेसम्म लाभाशं वितरण गर्न नपाउनेः बीमा समिति
एनबी बैंकको शेयर काण्ड छताछुल्ल, गर्भनर साब यो के हो ? एनबी बैंकले सम्बेदनशील सूचना लुकाउदाँ किन भएन कारवाही ? कहाँ छ राष्ट्र बैंक ?
नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकका सदाबहार अध्याक्ष पृथ्वी बहादुर पाडेको योजना बालुवामा पानीः हिमालयन बैंक बीच हुने भनिएको बिग मर्जर नहुने पक्का
साल्ट ट्रेडिङका अध्यक्ष उद्योगी लक्ष्मीदास मानन्धरको निधन
अर्थमन्त्री र गभर्नरको एकै स्वर: कृषिमा लगानी बढाऔं, कृषि विकास बैंकलाई ‘लिडर’ बनाऔं
१५ नयाँ बीमा कम्पनीहरुको लाईसेन्समा फेरि तिव्र चलखेल : चुनाबी खर्च उठाउने दलहरुको बक्रदृष्टि ?
नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीका डिसीइओ महर्जनको दादागिरीमा बीमा समितिका अध्यक्ष सिलवालको साथ, सत्ता र शक्तिको भरमा जे पनि गर्न छुट ?
आज प्रभु बैंकले यी शाखा कार्यालय मार्फत सेवा दिने
विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ नियुक्त
माछापुच्छ्रे बैंकको खातामार्फत आरटीजीएस प्रणाली सुरु
बैंकिङ कर्जा र व्याज तिर्नुनपर्ने सहुलीयत
मेगा बैंकले सार्वजनिक गर्यो नयाँ ब्याजदर, निक्षेप र कर्जामा कति ?
सामसङको ग्यालेक्सी ए१२ स्मार्टफोन बजारमा, मूल्य १९ हजार रुपैयाँबाट सुरु